‘गगन’को ‘क्षितिज पर’मा विचरण गर्दा मनमा उठेका छालहरू | मझेरी डट कम
‘गगन’को ‘क्षितिज पर’मा विचरण गर्दा मनमा उठेका छालहरू
nandalal.acharya — Fri, 05/07/2010 - 10:39
पहाडको फेदैमा मेरो छ गाम हजुर
गरिवको छोरो परेँ गगन मेरो नाम हजुर ।
काम खोज्दा जुत्ता चप्पल फाट्यो जीवन पनि
आफ्ना मान्छे नभए पछि नपाइने काम हजुर ।
आशैआशमा हामी मर्छौ यसमै पिल्सिएर
हुने खानेलाई नै पुरस्कारका खाम हजुर ।
थुप्रै हुन्छन् मान्छेहरू ढिलो आयोग खुल्दा
छैन हामीसँग बुझाउनलाई त्यहाँ दाम हजुर ।
कहाँ जाऊँ, के गरूँ जीवनदेखि हार खाएँ
यो वैरागीको जाने छैन कहीं पनि ठाम हजुर । (‘हजुर’ शीर्षक दिइएको केदार श्रेष्ठ ‘गगन’को ‘क्षितिज पर’ कृतिमा समेटिएको गजल)
आफूले आफ्नै ढंगले सृष्टि गर्नु एउटा काइदा हो, अरूले रचेका कुरा वारे भन्नु जोखिमको विषय हो । ठूलाले जे भन्दा पनि मान्नु पर्छ सानाले, सानाले रिठ्ठो विराएमा त्यो हुने गर्छ अबगालको बिउ । कहिले जस भेटिन्छ त कहिले अपजस । लेखनमा जसको मनोकांक्षा राख्दा असफल भइँदो रहेछ । जस्तो देख्यो त्यस्तै नलेखीकन पूर्वाग्रह वा अनुग्रह मध्ये एकको बुइँमा चढिएला कि भन्ने त्रास हुन्छ मनमा । गजल पारखी केशु विरहीले नेपाली गजल विधाको विकासका निम्ति मेरो अवधारणा माग्नुभएको रहेछ । नेपाली साहित्यको विद्यार्थी भए पनि मौलिकरूपमा गजलको अवधारणा बनाउँन सकिनँ । गजल पढ्न रस छ तर लेख्ने रीतिको कमि छ । मन नै नखाने पंक्तिबाट गजल निर्माण नहुने भएकाले मेरो वसभन्दा बाहिर रहेछ गजल भन्ने लाग्दै छ । गजल निर्माण चानचुने चुनौति होइन । गजलको बाढी आएको छ । त्यस बाढीमा मोतीहरू पनि तैरिरहेका हुन्छन्, फोहरमैला पनि उत्रिएका हुन्छन् । मोती जति चुन्नेर भण्डारण गर्ने र फोहरमैला जति पाखा लगाउने यो एउटा काइदा हो । माया गर्नेहरूले नै गजललाई जीवन्त रूप दिनुपर्छ । नामका भोकाहरूले गजललाई फजल बनाएको टुलुटुलु हेर्न हुन्न । दियाले– ३, ओखलढुङ्गा निवासी साहित्यकार इन्द्रकुमार श्रेष्ठकी बहिनी रीता श्रेष्ठका गजलहरू पत्रपत्रिकामा धेरै आउँथे ३, ४ वर्ष पहिले । मलाई खुब मन पर्थे पनि । उनको रुचिलाई सम्बोधन गर्दै पत्रमार्फत् मैले किन गजल लेख्नुहुन्छ, अन्य विधामा ठूलो मन पारेर ठूलै क्षेत्रफल ओगट्ने गरी लेख्न पाइन्छ भनेर सोधेको थिएँ । उनले भनेकी थिइन्–“गजल जस्तो रसिलो र मनमा अमीट छाप छाड्ने कुनै विधा नै छैन । अथाह कुराहरूलाई गजलका दुईचार हरफमा उतार्न सकिन्छ । तपाईंले ३,४ हजार शब्द खर्चेर लेखेको नाटकलाई गजलका १०, १२ हरफले समेट्न सक्छन् । निरन्तर साधना गर्ने साधकका निम्ति गजलमा मनको कुरा लेख्नु घिउभात खाए सरह हो, रहर मात्र गर्नेहरूका लागि ओखर चवाउनुभन्दा साह्रो हो ।” (गजलप्रेमी रीता श्रेष्ठ त्यसबेला मुटुरोगले पीडित थिइन् । विगत तीन वर्षदेखि मेरो कुनै सम्पर्क छैन । मेरा साहित्यिक मित्र तथा उनका दाजु दियाले– ३,ओखलढुङ्गा निवासी साहित्यकार इन्द्रकुमार श्रेष्ठसँग धेरै पहिले उनका बारेमा जिज्ञासा राख्दा बच्न र बचाउन गाह्रो छ, काठमाण्डूले हारेको छ भन्थे । अचेल भने रीताको कुरा उठाउँदा उनी कुनै उत्तर दिइरहेका छैनन् । सायद कुनै अनीष्ट अवस्थाको सामना गर्नु परेकोले पो हो कि भन्ने शंका लागिरहेछ । यस बारे कुरा प्रष्ट बुझ्ने अवसर पाइएछ भने उनका गजल सम्बन्धी अवधारणाहरू छुट्टै अध्यायमा लेख्नेछु ।)
सँगै बसी पिरतीको गीत गाए हुन्थ्यो
जीवनभरि नछुट्टिने नाता लाए हुन्थ्यो ।
पिरतीको खडेरीले यो ज्यान गल्न लाग्यो
यो मायाको सागरमा डुब्न पाए हुन्थ्यो ।
चोरी चोरी हेरी मात्र के हुन्थ्यो र
सुनकोशीको पानी छोइ कसम पनि खाए हुन्थ्यो ।
बाटैभरि मुस्कान छर्दै किन टाढा भाग्छौ ?
कहिलेकाहीँ यतातिर पनि धाए हुन्थ्यो ।
अभावले मात्र यो गगनलाई ढाक्छ किन ?
फूलैफूलको वहार पनि कहिलेकाहीं आए हुन्थ्यो । (अभावको जिन्दगी)
यस पटक भने यी माथिका गजलका स्रष्टा केदार श्रेष्ठ ‘गगन’को ‘क्षितिज पर’ गीतिकृतिको विचरण गर्दा मनमा उठेका छालहरूलाई लिपिबद्ध गर्न तम्सिएको छु । ढाँचाकाँचा सामान्यतः भिन्न प्रकारको छ । विदेशी माटोमा उभिएर स्रष्टा केदार श्रेष्ठ ‘गगन’ लेख्छन्–
सोध्छन् होला मेरा साथीहरू म आउने खवर
कहिलेकाहीं निराशाले बनाउँदो हो उनको मन बगर ।
गाई चराउँदै मेरै यादमा चहार्दी होलिन् वनभरि
सपनीबाट ब्युँझिएर खोज्छिन् होलिन् ओछ्यानभरि । (जीवन साथी)
बीच बाटोमै हराएँछु क्षितिज पर जान खोज्दा
बिचल्लीमा परेँ म त सागरको मोती रोज्दा । (आफूभन्दा प्यारो माया)
कहिँलेकाहीँं रिसाइदिँदा कान्छी भनी बोलाउँला
बाध्यताले टाढा भएँ भने सम्झिएर फर्की आउँला । (मुटुभरिको माया)
यता म भने मेरै मुलुकमा नै बेरोजगारी हात हल्लाउँदै सामन्तहरूको चाकरी गर्न लिप्त छु । चाकरी नगरी पेट नभरिने र अझ चाकरी नगरीकन यहाँ त शिर ठाडो पार्न नसकिने रोगले मलाई पनि गाँजेको छ । मेरो वर्तमान शब्द तौलेर बोल्नुपर्ने अवस्थामा छ । एकाध पटक शब्दले नै ज्यान जोखिममा परेको कटु अनुभव छ । समझदारहरूको मनको मान्छे भइएको छ भने असमझदारहरूको आँखाको कसिंगर । स्रष्टा कृष्ण धरावासी त द्वन्द्व भएका ठाउँमा लेखनका खुराक प्रशस्त हुन्छन् भन्थे । हो, दुईथरि बीच द्वन्द्व हुँदा र द्वन्द्वरत्हरूको गन्तव्य निर्धारण हुँदा उक्त नीति लागू हुन्छ । यहाँ त हकअधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा सरिक भन्दै नाट्यशालामाजस्तो नाटक देखाउने जम्मा पाँच कोरी भन्दा बढी दल, समूह छन् । भारतले चुड्दाचुड्दै कति बाँकी राखेको छ भन्न सकिन्न तर १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल हुनुपर्ने र पौने तीन कोटी जनतालाई सुख दिन हैन दुःखमा पार्न पाँच कोरी भन्दा बढी दल, समूह सक्रिय भएको स्पष्ट छ । मधेस मात्र हैन नेपालकै कुनाकाप्चामा लेख्दा ज्यान हत्केलामा लिनु परेका घटनाहरूको वेलिविस्तार लगाउँदा महाभारत नै बन्छ । अतः थोरै कुरा ‘क्षितिज पर’ कृतिको सहयोगले उल्लेख गर्ने उद्देश्यले हात अघि बढाउँदै छु । राजनीतिलाई पोशाक चाहिने साहित्यलाई नाङ् नजरले साहित्यलाई अराजकतामा हुर्कने अभिव्यक्ति देख्यो । र गै राख्ने काइदा छन् । विशेष गरी आख्यानमा बीपी कोइराला सगरमाथा उक्लेका मान्छे । उनको ाजनीतिले समाजको कल्याण नभएको र समाजलाई चेत नदिएकोले हुनसक्छ । साहित्य बराल्ने हैन, सपार्ने चीजको नाम हो । साहित्य मुक्त छ । राजनीति परतन्त्री छ । शौचालय राजनीति, उद्यान साहित्य । तर्कमाथि, तर्कले मन गिजोल्छ । अनुरागका काइदा पनि थरिथरीका हुँदा रहेछन् । राजनीति साहित्यबिना नबाँच्ने, साहित्य राजनीतिले भर नगरी नजन्मने । थरिथरीका मनहरू घुमिरहन्छन् मभित्र । तन नै घुम्छ, मन नै घुम्छ, अमनचयन अपहरणमा पर्छ । जहाँ छु, विहान भन्न पाउँदिनँ, दिन भन्न भेट्दिनँ । अझ रात त अर्काकै पर्यो । आफ्नो भन्ने कुराले त सञ्चो अनुभूति दिनुपर्ने । खोज्दा पनि भेट्दिन । मन ठीकमा आउने अवस्था हुन्न । थोत्रो कलमा श्रीमती झुण्डिन्छे । पानी खस्दैन । जताततै खडेरीले पक्रेको छ । कुरा बुझ्दिनँ । झर्कोफर्को गर्छे । एउटा हैरानमा अर्को हैरान थप्छे । सहन्छु । धेरै कुरा सहिरहेछु । निःशुल्क सङ्गीत पनि सुनेर सहेँ । निःशुल्क रक्तदान पनि भोगेर सहेँ । प्याट्ट एउटा गालामा थप्पड बजार्छु, अर्को चिलाइरहेकै हुन्छ । त्यहाँ थप्पड बर्साउन नभ्याउँदै शरीरको कुनै अवयव चिलाउन थालिहाल्छ । प्याट्ट र पुट्टको थप्पड बर्साइले पीडा थोरै कम हुन्छ, हात भने रक्तमुच्छेल । उतै ध्यान जान्छ, मन हर्दम शरीर बचाऊ आन्दोलनमा हुन्छ । मनबाट शब्द चुहलान्, चुहलान् भएकै बखत पुनः शरीर थङ्थिलो पार्न हिर्काउनैपर्छ । लेख्दै गरेको कलम खुत्रुक्क खस्छ । कलमसँगै मन पनि खस्छ । मन उठाउन सोच्ने गर्छु– चराचर सृष्टिमा यही एउटा मच्छड नामधारी जीवको जन्म नभइदिएको भए त हुन्थ्यो । चैन पनि खाने । ध्यान, ज्ञान मात्रै हैन मौका परे ज्यान पनि लाने । नाना रोग बोकेर नृत्य र सङ्गीतमा भुल्ने, भुलाउने र बदलामा रक्तदान लिने । यस जीवका लीला पनि अनमोल । राजनीति नाम मात्रको दबाई फ्याक्छ । रकम कुम्ल्याउँछ र व्यक्ति पोसिन्छ । धेरै भए पार्टी पोसिन्छ । राजनीति बडेमानको घरमा चारैतिर बलिया जालीले घेरिएर बस्छ । जनता कहाँ मर्दैछ ? के सकस छ ? बुझ्ने उसको दिमाख छैन । सुन्ने उसको कान छैन । हेर्ने र भोग्ने फुर्सद छैन । मात्र बोली छ । बोल्छ । के बोल्छ, बोलीसकेपछि उसैलाई थाहा हुन्न । तालीको अभिलाषी भएर बोल्छ । पत्रिकामा आएपछि झसङ्ग हुन्छ र पत्रकारको मनपर्दी हो, मैले बोलेकै हैन भन्छ । कुरा एक कान, दुई कान मैदान हुन्छ । न बोलीको काम हुन्छ । न कामको बोली रहन्छ । सोचमग्न हुनबाट मन जगाउँछु । कलम पक्रन्छु, वत्ती जान्छ झ्याप्पै । जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र नेपाल । पानीको खडेरीले विजुली नभ’को । हुकुम गर्न सजिलो छ । व्यवहारमा चाहिँ राजनीति सधैँ उज्यालो खान्छ, उज्यालै पिउँछ । फ्याक्न मात्र अँध्यारो फ्याक्छ । छक्कापञ्जाको खेललाई रमरम अँध्यारो नभई हुन्न । बत्ती जानु एक क्षण सारा सुनसान छाउँनुहुन्छ । मन पनि सुनसान । मट्टितेल बालौँ बाल्ने मन हुन्न । दाम बढ्छ सुनकै भाउमा । त्यस उज्यालोले मनलाई पगाल्न पनि सक्दैन । मन नपग्लिए शब्द चुहने कुरा पनि हुन्न । बरु पहिले देखिकै नृत्य र सङ्गीतमा झुम्नुको विकल्प देख्दिनँ । अराजक साहित्य जन्माउन खोज्दा, अर्को अराजकता भोग्नु परिरहेछ । अराजकताको झोला बोकेर हिँडिरहेछु । नसक्ने जीवन बाँचिरहेछु । बाँच्नुभित्र पनि मूल्य खोजिरहेछु । बिसाउने ठाउँ छैन । सहिरहेकै छु । सहनुको अर्को नाम नै जीवन रहेछ ।
विदेशी भूमिमा संगालेका यस्तै, त्यस्तै औडाहाहरूलाई स्रष्टा गगनले समेटेका छन् । यस्तै जीवन सहँदै ‘क्षितिज पर’ कृतिका सर्जक गगनले बैसठ्ठीवटा गीत र गजलको संगालो तयार पारेका छन् । जसमा मिलनको आशमा विरहका भाव मनग्यै समेटेका छन्, श्रृङ्गार रस उत्पन्न गरेका छन् । डायास्पोरिक चेतनालाई मार्मिक तवरले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रणयलीलामा नैतिकताको ह्रासबाट सचेत भएर परोक्षरूपमा खबरदारी गर्न भुलेका छैनन् । मातृभूमिको प्रेमका लागि नेपालीको वीर गाथा सवैभन्दा माथि भएको कुरा पनि लेख्न भुलेका छैनन् । आजको लेखनको अभीष्ट समाज सुधारको चिन्तनबाट प्रेरित हुनुपर्छ भन्ने ठहरलाई उनले राम्ररी नै अठ्याएका छन् । यी हरफहरूमा भने गगनका गजलका पंक्तिहरूलाई घुमाइफिराई चर्चाको विषय बनाउँदै छु ।
विदेशिने नेपाली विदेशमा घुम्दै छ, म भने स्वदेशमै । घुमेँ, बेस्कन घुमेँ, राजनीतिको जाँतोमा फनफनी घुमिरहेछु । मुख भन्छ–अधिकार चाहियो । काम भन्छ–एनी हाउ दाम चाहियो । ए बाबा, जाऊ सरकार सामु जाऊ । टेबलमा बस । कुरा सुन । कुरा राख । कसले कसको भाग हरण गर्यो ? कसले थोरै पायो, कसले धेरै पायो ? हिसाबकिताब गर । मसँग हिसाब किन माग्छौ ? म आफैँ मगन्ते हुँ । पलपल मृत्यु नजिक पुगिरहेछु । निम्त्याएका सन्ततीका लागि मुण्टो लुकाउने ठाउँ जोडिदिएको छैन । शरीर त्याग्न आफ्नै छाप्रो भए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेको छु । मसँग अराजक कलम छ । मसँग दरिद्र मानसिकता छ । छ नै भने भोको पेट छ, मुस्किलले लाज छोपेको काया छ । मन च्यात्छौ भने राम पनि छैनन्, सीता पनि छैनन् । मात्र ठूलाठूला आकांक्षाका महल छन् । मखमली विस्ताराहरू छन् । अत्तरले सुवासिला ठाउँ छन् । हुन सक्छ, भौतिक दुनियाँका अरू थुप्रै कुरा छन् । भएका कुरा तिनै हुन् । न गोजी दाम छ, न बाहिर नाम छ । आएको थिएँ भन्ने सूचना छाड्ने मन छ । सूचना बेगर छाड्ने मन छैन । मैले छाड्दैमा न दाम हात पर्ला न अधिकार नै पोल्टोमा आउला । दाम अधिकारका लागि हैन, मामका लागि पनि हैन । मलाई पनि थाहा छ–सोमरस र सूरासुन्दरीका लागि । अधिकारसँग जोड्ने साइनो त हतियारका खरिदका लागि । हतियार आत्मसुरक्षाका लागि । साँचो कुरो कहाँ छ ? मुखमा एकथोक छ, कार्यमा अर्कैथोक छ । यहाँ त देखिरहेछु, भोगिरहेछु । छोरो डराउँछ बाबुदेखि । यो त ठीक छ तर बाबु डराउँछ छोरोदेखि । दिदी अत्तालिन्छे बहिनीदेखि बहिनी काँप्छे दिदीदेखि । डर ओडिन्छ, डर लगाइन्छ, डर खाइन्छ, डरसँगै सुतिन्छ, डरसँगै उठिन्छ यहाँ । डरले साम्रज्य जमाएको छ, यहाँ । खुल्ला सीमानाले राज गरेको छ, यहाँ । वैद्य होस् या अवैद्य आउन र ल्याउन, जान र लैजान रोक छैन, टोक छैन । कतै ‘रोक’ नामक स्वर सुनियो गोजी भर्दियो भइगयो । हुन त मैले गोजीको कुरा भन्दा बाहिर सुन्न परेको छैन । पढ्न परेको छैन । लेख्न परेको छैन । यहाँ त, मामका लागि काममा धसिने धस्सिएकै छन् । दामका लागि हानथाप चल्ने कुरा चलेकै छ । मन चुँडेर फ्याकेको छु र म यहाँ छु । मन राखेर तन रहँदैन यहाँ । नत्र पुग्थेँ कहाँ हो कहाँ ? मेरा ज्ञानेन्द्रीयले समय समयमा काम गर्दैनन् यहाँ । इन्द्रिय बसमा राख्न हुन्न । परिचय बोकेर शिर उच्च पार्नु जोखिमको शिर कुल्चनुहुन्छ यहाँ । महान् इतिहास बोकेको मधेसले महानतालाई बोक्न पाएको छैन । उम्रदैका नेताले, च्याउ सरिका समूहले मधेसी जनताका नाममा भजाउँने नम्बरी नोट भएको छ मधेस, यत्तिखेर । यो नेपालमा छ वा छैन ? म घरिघरी तर्सन्छु । पचहत्तर जिल्ला छँदा अहिले म उभिएको ठाउँलाई छयहत्तरौँ जिल्ला भन्थे । सङ्घीय राज्य भएपछि भने के नामाकरण हुने हो पर्खेर बस्नुको विकल्प छैन । त्यस्तै गगनलाई विदेश कस्तो लागेको छ त, हेरौँ यी पंक्तिहरू–
जता हेर्यो बालुवैबालुवा छट्पटाउँदैछु प्यासमा
धेरै दूर मेरी उनी म यो विरानो परदेशमा ।
यो मन त्यसै हतारिन्छ उनीलाई एक झल्को हेर्न
उडी जाऊँ पंख छैन हिँडी जाऊँ सकिदैन सागर तर्न
अनयासै वर्वराउँछु उनको नाम प्रत्येक पलको सासमा
धेरैं दूर मेरी उनी म यो विरानो परदेशमा ।
उनकै यादमा पिउँदा पिउँदै गलिसक्यो ज्यान पनि
देउता भाकी बसिरै छु भेट गराईदेऊ लौन भनी
बित्यो दिन, महिना, वर्ष उनीसँग भेट हुने आशमा
धेरै दूर मेरी उनी म यो विरानो परदेशमा । (बलुवैबालुवाको देशमा)
म कहाँ पनि उर्दीको उरुङ्ग थियो, मुसहर्नियादेखि नाम्चेसम्मको । ‘ओ दाजु, तिमीलाई हामी मान्छु । तिमी दुःख खाने काम नगर् । हामीले भनेको मान्छ भने हामीलाई सहयोग गर् । हामीलाई मात्र एक पेटी दे । नदिने भए माथि, माथि जा, कहिल्यै नफर्कने गरी जा ।’ सम्झन्छु– मर्नु त छँदै छ । जता गए पनि,जता पुगे पनि, जहिले भए पनि आउनेले नगई हुन्न । मलाई झट्टै जाने मन छैन । मजस्तै अरूलाई पनि गइहाल्ने मन छैन । ठाउँ छाडूँ– कहाँ जानू भोको पेट देखाउँन । आफ्नो हातको कार्य शैली स्वर्ग गइगो । दिमाख शैलीको महामारी चलेको छ, जताततै । ठाउँ छाड्दा पनि मर्नुको विकल्प देख्दिनँ म । ठाउँ राख्दा पनि नाम्चे बजार उकालो लाग्न थाल्यो–उर्दी । जा, माथि नै जा । सगरमाथाको फेदीमा मात्रै हैन टुप्पामै पुगे पनि पुग् । आखिर जहाँको पानीले बनेको रगत छ, त्यही रगतले यहीँँँ धर्ती रंगिने त हो । उर्दीवालाका लागि एक क्षण रक्तहोलीको मौका न आउने हो । तर एकजनाको रगतले धेरै ज्यानको वचत हुने अवस्था नै देखिनँ । नदेख्नुमै हराउन थालेँ । बरू कानै नभइदिएका भए, आँखै नरहिदिएका भए बेस हुन्थ्योजस्तो पनि लाग्न थाल्यो । मन पत्थर भो । तन बूढो भो । बोली बन्द भो । कान कानेगुजीको राजधानी भो । आँखामा रतन्धो रोग पस्यो । म सजीवको रूपमा निर्जीव अवतार भएँ । तब त छु, यहाँ । चोरी, चोरी कलम उठाउँदै छु । नामलाई पनि निर्जीव पार्ने हो भने मनको वहलाई विछ्याउन सहज पथ्र्यो कि ?
यी अक्षरहरू जोडेर उघ्राएर थाकी सुस्ताएको सिंहलाई कोट्याउँदै छु । त्रास घाँटीसम्म आएको छ । शब्दकै कारणले मृत्युले आशीर्वाद दिएका धेरै घटना पढेको छु । थोरै देखेको छु । भोगेको छैन र पो छुच्चो हुँदै गएको छु । भन्ने कुरा धेरै छन्, मनले मनसँग । अरूलाई देखाउने र सुनाउने भने एकदमै नगन्य । छटपटी र बेचैनीलाई मुख्य साथी बनायो, लण्ठासाफ । मुखबाट पौराणिककालकोजस्तो आदर्श वाक्य बाहेक अर्थोक ननिकालो, बस् लण्ठासाफ । विद्रोही स्वर कुन जन्तुले निकाल्छ, थाहै नभको भएर बस्यो, बस् लण्ठैसाफ । सबै कुरा साफ गरेर मात्र सधैँ बस्न नसकिने रहेछ । फोहरमा बस्नु पनि जिन्दगीको परिचय रहेछ । धोका माथि धोकाको खेल हुन्छ जताततै । त्यही धोका खाँदाखाँदा त मन पाकिसक्यो, थाकी सक्यो । पाक्नु र थाक्नु त चुप भएर बस्नु हो । मन न हो, कहाँ बस्छ र ! राख्ने ठाउँ नभई यसले अडिन नै जानेको हुन्न । मन ठाउँको खोजीमा स्वतःस्फूर्त लाग्छ । कतैकतै झिनो आशाको त्यान्द्रो बाँकी नै रहेको पाउँछ । थोरै प्रकाशवाला भए पनि दीपक जगमगाए राखेको भेट्छ । त्यही सानो उज्यालोले ठूलो उज्यालो डाक्छ कि भन्नु पर्या छ । जसो गरे पनि यहाँ मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ । उता स्रष्टा गगनको कलम चाहिँ भन्छ–
हाँस्दै भेट्न आउने मान्छे आज तर्किएझैं लाग्यो
मतिर धाउने पाइला अन्तै आज लम्किएझैं लाग्यो ।
सँगै बसी अघाउँदिन मुटु भित्रै बसूँ लाग्छ भन्थी
फूलजस्तै अर्कै भमरासँग आज पल्किएझै लाग्यो ।
रूप हे¥यो हेरिरहूँ बोली झनै कोइली जस्तै
त्यति मीठो लाग्ने बोली आज झर्किएझैं लाग्यो ।
हिरामोती हैन माया दिनु भन्दा मख्खै पर्थेँ म
त्यही धनदौलत र महलमा आज रित्तिएझैं लाग्यो । ( तर्किने माया)
थुप्रै खेलबीच एक खेल छ, जहाँ भेल मात्रै हैन मेल पनि छ । आशय थुप्रै निस्कन्छन् । चोट दिनेले भोट पाउन्न । चोटको दर्द नमेटिउञ्जेल मनमा आदर जन्मदैन । मनको स्वभाव नै चित्रविचित्रको हुन्छ । सबैलाई सधैँ एकै खाले तुलोमा राखेर हेर्दा इतिहास झुटो बन्दो रहेछ । मन खाने कामको कुरा छाडे निष्पक्षता कहाँ पाइन्छ र ! सधैँ फलामलाई फलामले नै काट्दै आएको छ । बन्दुकलाई बन्दुकले नै पहरा दिँदै आएको छ । फलामका अघि फलाम झुक्दैन, बन्दुकका अघि बन्दुक झुक्दैन । त्यहाँ मानव मन जुट्ने हो भने फलाम पनि रूपान्तरण हुन्छ । बन्दुक पनि थान्को लाग्छ । जहाँ जति बढी द्वन्द्व छ, त्यहाँ त्यत्ति बढी मेल लुकेको छ । मेललाई झेल देख्नु विनासको सूचक हुन्छ । मधेसमा देखिएको मसिनो भावनामा मन कल्पाउने तागत पनि लुकेको पाएको छु । म यहाँ सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीकै भोलि देखिरहेको छु । थोरै भए पनि सुनौला फूल फूलिरहेको पाएको छु । मनले मधेसलाई जित्नुपर्छ, बाँकीलाई मधेसीले नै जिताउँछन् भनिरहेछु । थोरै मधेसलाई जितेर त हेर, पूरै मधेसलाई जित्ने मौका स्वतः आउँछ । आजसम्म मधेसलाई हराएर राज भो, हारेकाले जित्न खोजेको मात्र हो । जित्नका लागि त्यान पनि सक्नुपर्छ । विना त्यागको जितौरी दुई दिनको मात्र हो । फेरि हार्नकै लागि दुई दिन जित्नु अनिष्ट निम्त्याउनु हो । हार्न नजान्नेले जित्न पनि जान्दैन । जितलाई बचाउँन नसक्नेले हारलाई सहन पनि सक्दैन । सधैँ थिच्न जित्नु परेको छैन । सधैँ विगत विउँझाउन मनासिव पनि छैन । विगतको अध्यायलाई उल्टाएर नपढे नयाँ रोडम्याप पनि पत्ता लाग्दैन । रोडम्याप विनाको काम अँध्यारोमा बन्दुक चलाएझैँ घातक हुन्छ । मनले मधेसीलाई हृदयमा पसाउँनुपर्छ । मनले मधेसीलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । मन नै नभएकाहरू मधेसमा मह चाट्न आउँछन् । तिनै चटुवाहरूले मधेसलाई मसानघाट बनाए । दानवीर बन्नु परेको छैन, खानी छ यहाँ । दिन परेको छैन, नखोसे भएको छ यहाँ । दयालु मनले रित्तो झोला लिएर आऊ, भरेर लैजाऊ । क्रोधी मन र षडयन्त्रपूर्ण दिमाख लिएर आऊ, मार र मरेर जाऊ । यो पनि हो–भर्ता झोला ल्याऊ, खन्याउने ठाउँ मिल्छ यहाँ । बाँकी दुःखका घर कैँटे बन्दुकहरू स्थूल मनको अघि टिक्न सक्दैन । कैँटेलाई मधेसले नै पाताल भसाउँछ । भरौटेलाई पाखा पार्दिन्छ । मधेस विवेकले ताते चैत्र, बैशाख आउँनै पर्दैन, सधैँ, सधैँ वसन्त बहार रहिरहन्छ । वसन्त फुलिरहन्छ । वसन्त फक्रिरहन्छ । म पनि फुल्छु वनैभरि लालीगुँरास भएर । म पनि फक्रन्छु, मुसहर्नियादेखि चोमोलुङ्मासम्म पुगेर । सर्तहरू मानिदिएमा शान्ति, सुव्यवस्था नआउने कुरै छैन । वसन्त नआउने र लालीगुँरास नफुल्ने कुरै आउँदैन । यता स्रष्टाको
मनमा रंग चढ्दै छ, हल्का हल्का ।
नक्कली मैयाको नखरा हल्का हल्का
तिम्रो नाममा पिएँ मदिरा हल्का हल्का ।
वेइमानीले चटक्कै भुलेर गई मलाई
म भने तिम्रै यादमा तड्पिरा हल्का हल्का ।
वैगुनीको मन त ढुङ्गै हुन्छ क्यारे
मेरो मुटुमा विछोडको सुइरा हल्का हल्का ।
वेसारे त अर्कैसँग रमाइरहेकी होली
म चाहिँ सधैं रोइरा हल्का हल्का ।
उद्देश्य लिएको थिएँ के के न गर्ने
तर गगनको जीवनमा धमिरा हल्का हल्का । ( हल्का हल्का)
फोन न.ं ०३१५२००३८ सम्पर्क ः ९८४२८२९२०६÷९८०७७७९७६८
दिनाङ्क ः ०६७।०१।०१
नविर्सने चैत्र २८
जन जब ढल्छ लासमा
आफ्नो मन आफैं बाँधी
पिठो मैदा पारी दिल (आफ्नै बहरमा)
छोरी सम्झी सिरानीमा
तिमी को थियौ
मेरो मौन प्रेम
काले (तीन मुक्तक)
फूलको हासो तिमी राख्नु
आज तिम्रो संझनामा
फक्रेर फूल झरेको देखेँ
इलाम र काठमाडौं
वैंशालु रात थियो